Thet Twe – A Poet in Mind. A Coder in Substance.
မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျားလူမှားတာ တစ်ကယ်တော့ သူကသေသွားပြီ သြော် တစ်ကယ်ပါဆို ခင်ဗျားနှယ့် မြေခွေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လိမ္မော်ခြံထဲ စပျစ်ပင်တွေ ဖောက်ခဲ့တဲ့တစ်ယောက်ကို ပြောတာမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်...
by Thet Twe
အိပ်မက်ထဲ အိပ်မက်နဲ့ဆင်တာတွေ စစ်ဖယ်နေမိ … ကိုယ့်ကိုကျောပေးထားတဲ့ စံပယ်ပွင့်လေးရေ …. ကိုယ့်အပေါ်ပြေလျော့နေတဲ့ ဖဲကြိုးလေးရေ …. ကိုယ့်ဆီ ငဲ့ကျဖူးခဲ့တဲ့ ရယ်သံလေးရေ …. တံခါးဖွင့်ပါကွာ .....
တစ်ခါတစ်လေ သိပ်ရယ်ရတယ်မဟုတ်လား … ကျွန်တော်ပြောပါတယ် … ကွဲအက်ကြေ ဝင်သက်လေး ခိုးရှုဖူးယုံနဲ့ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်နားအလည်ဆုံးတဲ့ … ကျွန်တော်ဟာလေ သိပ်ရယ်ရတယ် … ခန့်မှန်းနေကြ...
“It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience.” – Julius Caesar ကျွန်တော် ဒီ playlist အတွက် တစ်ခုခုပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ Julius Caesar ပြောခဲ့တဲ့စကားထက် သာလွန်တဲ့ စကားရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။...
ကျွန်မ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ဖို့ မကြိုးစားတော့ဘူး။ ရှင်သိလား ခပ်ရှရှ ရယ်မောနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မှိန်ပျပျ စိတ်နံရံမှာ တခုတ်တရဆုပ်ကိုင်ထားတတ်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နူးညံ့မှုတွေ ခဏခဏ...
မခင်တွယ်လိုတော့တဲ့ မပြတ်သားမှုနဲ့ နွမ်းလျနေရောပေါ့။ “ခေါက်ရိုးတစ်ဖက်” “ချိုးရာတစ်ဖက်” သေသေသပ်သပ် အိတ်ကပ်ထဲထည့်။ ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးခဲ့ပါပြီ။ စက္ကန့်တံတွေနဲ့ နားကြားလွဲခဲ့တဲ့...
လေကောင်းလေသန့်တွေ တစ်ညလုံး ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ် … သွေးရူးသွေးတန်း လမ်းထလျှောက်ရအောင် ခါးကြားထိုးထားတဲ့ နေသားကျမှုမှာ ပျော်ရွှင်မှုတစ်စက်မှ မကျန်တော့ဘူး … အတည်တကျချိန်းဆိုထားတာ...
အန်ထရိုပီ [entropy] (၁)
ကျွန်တော်ကဗျာရေးချင်တယ် … တစ်ကယ်ပြောတာ …. အရင်လို “ခင်ဗျားအကြောင်း” … အခုလို “ခင်ဗျားအကြောင်း” … ဒါမှမဟုတ် … နောင်လို “_______” ထားပါ …. ကွက်လပ်ဆိုတာ … ကျွန်တော့်အတွက်...
အမှောင်တစ်ချို့ အလင်းတို့ကို အလစ်သုတ်သွား .. မြို့ပြရဲ့ မထွက်တတ်သော ဆည်းဆာအား ခေါင်းပုတ်၍ နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အသံတွေနဲ့ပျာယာ ခတ်နေတဲ့ နှစ်သက်သော မြစ်လေးကို ငါသည် ကျောခိုင်းခဲ့ပြီ။...
လူတွေအကြောင်းပိုနားလည်လာလေလေ .. အသက်ရှူသံတွေကို ပိုစာနာမိလေလေ
ထိတ်လန့်မှုဟာ ဘယ်လောက် နက်ရှိုင်းနေပြီလဲ … ပျော်ရွှင်မှုကို ဒန်းလိုလွှဲနေရတာ မောပြီ … ပစ်တင်လိုက်ရတဲ့ နားလည်မှုဟာ တစ်ခါတစ်ခါ ပြန်ကျမလာဘူး … ရပါတယ် … ယုံကြည် မပေးပါနဲ့ …...
ရွေ့လျား နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ငေးကြည့်
တစ်မြို့ထဲ နှဖူးပေါ်ဝဲကျနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့
နှလုံးသား အနွေးဓာတ်လေးက လင်းလို့
တိမ်တွေဟာအရင်လို ပြာချည်းမနေတော့ဘူး ။ ။
၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇
ဝဋ်ဒုက္ခကို အချိန်ဆွဲထားလို့ ရလား
သတိရစိတ်က ငါ့ကို ရယ်ပြီး
ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ငါကရယ်တယ်
ချစ်ခြင်းနဲ့ မေတ္တာ ဘယ်သူအရင်ဝင်လာလဲ
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာ လုံးချေထားတဲ့ ဆွံ့အမှုနဲ့
လေယာဉ်ပျံတွေကြီး ငါ့စိတ်ထဲ ဝဲနေတယ်
လေချွန်သံတွေ အစိမ်းလိုက် ငါလွှတ်ချမိပြန်ပေါ့
ပျော်ရွှင်မှုဟာ မင်းကို အဝေးကြီးခေါ်သွားတယ်။
၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
ငါနဲ့မင်း တက်တိုက်ရမဲ့ စစ်ပွဲများ
ငါတစ်နေကုန် ထိုင်ကြည့်နေတာ။ ။
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
နောက်ခံတီးလုံးတွေ ထည့်ဖြစ်ဦးမှာပါ ။ ။
၉ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅
နိစ္စဓူဝ ဖုန်းလာကိုင်တော့ရင် ။ ။
၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅
မိုးလင်းပေါက်ဘုံဆိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာတော့ ငါရယ်၊
နယူးယောက်မြို့ကြီး ဖြစ်မလာနိုင်တော့ ငါရယ်၊
အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်သွားတော့လည်း ငါရယ်၊
ငါ့ရင်ကိုဖြတ်မဲ့ စိန်ပွင့်လေးတွေလက်နေတော့လည်း ငါရယ်၊
ဝိုင်တစ်ခွက်နဲ့ အနွေးဓာတ်လိုသလို မင်းကိုငါလိုတဲ့အခါ ငါရယ်ခဲ့
မျက်နှာလွှဲသွားတဲ့ မြင်နေကြားနေကြ နူးညံ့မှုတွေနဲ့
ငါရယ်ဆဲ ။ ။
၂၉ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅
ကျွန်တော်လည်း ပျော်ပါစေ။ ။
မေ ၉ ၂၀၁၅ မနက် ၁၂း၃၈
ဇူလိုင် ၇ရက် ၂၀၁၅
နပ်မှန်ဖူးတဲ့ ငရဲကို မေ့ပြီ
ထိုးရပ်သွားတဲ့ အသက်ရှုသံကို မေ့ပြီ
လမ်းမကြုံတော့တဲ့ ထမင်းလုံးတစ္ဆေကို မေ့ပြီ
တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာ အက်တွန်တစ်ခုသာ ။ ။
နို ဝင်ဘာ ၁၉ ၂၀၁၅
စိတ္တဇ ( ၉ )
သံမှိုစွဲ ပြတင်းတံခါးဟာ ငြိမ်မြဲငြိမ်နေ
သစ်ရွက်တွေကို လှုပ်ယူရတယ်။ ။
၂၉ မတ်လ ၂၀၁၆
စိတ္တဇ ( ၁၀ )
ဒီ့ထက် ပူတဲ့နေ့တွေရှိမယ် ..
ကွက်ကျားမိုးနဲ့ သက်တံ့သေတွေ မြင်မိမှ
ဘုရားသခင် ဖန်တီးမှုကို ပြန်လည်သတိရ
ကံကြမ္မာကို ဆဲရပြန်တယ်။ ။
မေ ၃၁ ၂၀၁၆
ကိုင်ထားတဲ့ အံစာကို ချလိုက်ပါ
ကြောင်လေး အဖြစ်နဲ့ ထားရမှာပဲ
ရှပ်အင်္ကျီထဲ ဟာသတွေ ထည့်ထားတယ်
ပျင်းရိမှုကို မကြာခဏ ထုတ်ကြည့်ရတယ်
သတ်ကွင်းထဲ တံတွေးမျိုချတာ့ကော ဘာထူးဦးမလဲ
ဝတ်တော့ မကျေခဲ့ပါဘူး ။ ။
ဇူလိုင် ၁၆ ၂၀၁၅
စာကြွင်း။ ။ အန်စာ = အန်ထားတဲ့စာ ၊ အံစာ = အံစာတုံး
ပုခုံးတစ်ဖက်ကို မမှီနိုင်တဲ့ လက်တွေနဲ့
တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဖျားလျက် အိပ်မက်တွေ
အစွန်းအထင်းခံ အနွေးဓာတ်တစ်ခု မလိုအပ်ဘူးလား
ရထားတစ်စင်းကို ငါတို့ စောင့်စီးမယ်
ပျံသန်းမှုနဲ့ ငါတို့ စမြုံ့ပြန်မယ်
ငါတို့ ဆာလောင်မှုကို ကောင်းစွာမလည်ပတ်နိုင်
ပြာနှမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ
လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေသာ ငါတို့ ဖြစ်လိုက်ကြယုံ
ငါတို့ ကမ္ဘာကြီးကို မေ့လိုက်ဖို့
ကမ္ဘာကြီးက ငါတို့ဆုတောင်းတွေကို မေ့လိုက်လို့ ။ ။
၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄
ငါ့နေက မင်းဘက်က အစောကြီးထွက်တယ်
ငါ့မျက်လုံးဆုံးတဲ့အထိ ငါ့စိတ်က မဆုံးသေးဘူး
အိမ်ပြင်ကို တစ်ညလုံး ငါထွက်ကြည့်ဖြစ်တယ်
ဂန္တ၀င်တေးသွားတွေ သယ်လာတဲ့ ငါ့ကို တွေ့တယ်
စက္ကူလေယဉ်ပျံလေးတစ်စင်း ပြင်ထားတဲ့ မင်းကို တွေ့တယ်
မင်းနဖူးပေါ်က စံပယ်ပွင့်လေး ဘယ်သူတွန်းရွှေ့ခဲ့သလဲ
မင်းအသက်ရှုသံပေါ်က ဆွဲကြိုးလေး ဘယ်သူတတ်ပေးခဲ့သလဲ
ယတိပြတ်သံသယရှိဖို့ မင်းစိတ်ကူးခဲ့စဉ် ငါရှိခဲ့တယ်
မိုင်ကုန်မောင်းနှင်ဖို့ မင်းငြင်းပယ်နေစဉ်မှာလဲ ငါရှိနေဆဲ
ငါတို့နှစ်ယောက်ဟာ အတ္တကြီးစွာ အသံတွေ ဖူးပွင့်မယ့်နေ့ကို စောင့်နေတယ်
ဆုတောင်းဆိုတာ မင်းရယ်ငါရယ် ပစ်ချထားခဲ့ဖူးတဲ့ ခိုစာတွေပဲ
မင်းလည်း ငါ့လိုဆို ခံတွင်းပျက်မိမှာပဲ ။ ။
၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄
ကိုယ်က သူ့ဘေးမှာ ငုတ်တုတ်
ကိုယ် သူ့ဆီက စာအုပ်တစ်အုပ်
ကိုယ် သူ့ဆီက အအေးတစ်ပုလင်း
“ကမ္ဘာကြီးဟာဒီ့ထက်ပိုပြီး အတိမ်းအစောင်းမခံတော့ဘူး” ကဗျာကို
အဲ့လိုပဲ သူ့ကို မှီထားရင်း ကိုယ်ရေးခဲ့တယ်
သူ့ပုခုံးလေး မှီထားချင်တဲ့ သူတစ်ယောက် သူ့ဆီတိုးစေချင်တယ်
ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ခြေသံတွေကို နားထောင်တယ်
ကိုယ်က နေကာမျက်မှန်တစ်လက်ရဲ့ အလင်းလက်ဆုံးနေ့တစ်နေ့အကြောင်းနဲ့
ဘက်ထရီကားလေးတစ်စီးရဲ့ အဝေးဆုံးခရီးတွေအကြောင်း ပြောတယ်
ကိုယ့်ထီးဂေါက်လေးက အညောင်းပြေအညာပြေ လမ်းလျှောက်ထွက်ချင်တယ်တဲ့
ကိုယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာနေတယ်
သူ သူ့ကိုယ်သူ တွေ့ထားတယ်
မိုးတွေရွာဦးမယ် ။ ။
၂၂ရက် ဧပြီ ၂၀၁၄ ညနေ ၅း၅၀
ခပ်လှမ်းလှမ်းကလက်ခုပ်တီး ။ ။
၃၁ အောက်တိုဘာ နေ့လည် ၃း၄၆
ငါ့ဘေးမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတာ ငါတွေ့တယ်
ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲမှာ ငါရှုံးပါတယ်
ငါ့ ဦးခေါင်းထဲ ယိုစီးနေတဲ့
၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၃ နေ့လည် ၃း၀၃
ဒီကဗျာက မခိုင်စိုးလင်း ဦးစီးထုတ်လုပ်တဲ့ ရောင်စုံစက္ကူ ebook အတွက်ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့စာအုပ်အတွက် ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ theme ကို ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တာမို့ ကျွန်တော်ရေးပေးရမဲ့ ကဗျာအတွက် အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ theme ဟာ တစ်ကယ်တော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ နေ့စဉ် ကျွန်တော်တို့နဲ့ အထိတွေ့အများဆုံး အရာတစ်ခုအတွက် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပြောပြစရာက အဲ့လောက်မရှားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ရိုးဂုဏ်ရှိတဲ့ အရာတစ်ခုကို သူ့ပကတိအတိုင်း အဆန်းတဝင် ဘယ်လိုချပြနိုင်သလဲဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ Story Line တစ်ခုထက် Abstract အသားပေးရေးမယ်လို့ အစောကြီးထဲက စိတ်ကူးခဲ့ပေမဲ့ တစ်ကယ်တမ်းရေးတဲ့အခါကျ Realism ဘက်ပါသွားနွယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး Abstract Realism တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီကဗျာအမျိုးအစားမျိုးကို ဆရာနေမျိုး အများဆုံးရေးလေ့ရှိပါတယ် (ကြောင်, ဥာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့မြို့, နွားပြာကြီးကြောင်းဖွဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ) စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒီကဗျာမှာ ငါးကို ဇာတ်ကောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ အဲ့ဒီ့အချိန်အခိုက်အတန့်မှာ ကျွန်တော် အိမ်မှာ ငါးထိန်းလုပ်နေရလို့ပါပဲ။ ဒီကဗျာမှာ ငါးတွေရဲ့ characteristic နဲ့ လူတွေရဲ့ nature/behavior တို့ကို ပေါင်းပြီး ပိုက်ဆံနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အချက်တွေကို ထုတ်ပြထားပါတယ်။
ငါးတွေဟာ ဇိမ်ခံသဘောင်္ကြီးစီးရင်း လှိုင်းမူးပြီးအန်တယ်။
ငါးတွေဟာ ရေတိမ်နစ်မှာစိုးလို့ အသက်ကယ်ဘောတွေ ဆောင်တယ်။
ငါးတွေဟာ ငါးမရတဲ့နေ့တွေမှာ ကြောင်ဖမ်းပြီးပြန်တယ်။
ငါးတွေဟာ ငါးကြော်ကြိုက်ပေမဲ့ ငါးရိုးစူးမှာကြောက်တယ်။
ငါးတွေဟာ ငါးခုံးမသီးသန့် ငါးပြတိုက်ဖွင့်ပြီး ငွေရှာတယ်။
ငါးတွေဟာ တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်စေမယ့် ခိုးကူးခွေနဲ့ ကားပါမစ်တွေ တင်သွင်းတယ်။
ငါးတွေဟာ ပြည်တော်ပြန်ငါးတွေကို ငါးသေတ္တာဆိုပြီး ဈေးကွက်ထွင်တယ်။
ငါးတွေဟာ မှန်လုံခန်းလှလှလေးထဲ ပေါင်တံဖြူဖြူလေးတွေထဲ့ဖို့ ဈေးဝယ်ထွက်တယ်။
ငါးတွေဟာ အနုပညာခံစားလိုတာနဲ့ ငါးကျောင်းသားတွေ ခန့်တယ်။
ငါးတွေဟာ ငါးရိုးစုပါ ဆေးမင်ကြောင်တွေ ဖက်ရှင်အဖြစ်ထိုးတယ်။
ငါးတွေဟာ ရေငတ်မပြေတဲ့ ဇိုးသမားတွေဖြစ်တယ်။
ငါးတွေဟာ ပျင်းတဲ့အခါ မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတမ်းကစားတယ်။
ငါးတွေဟာ ရေထိုးပေးနိုင်မဲ့လက်တွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီးနေတယ်။
ငါးတွေဟာ ဂဏန်းပေါင်းစက်ထဲ ခတ်ပြတ်ပြတ် ဘာသာစကားတွေ ထည့်တယ်။
ငါးတွေဟာ ဘုရားသွားကျောင်းတက်ရတဲ့အခါ အောက်စီဂျင်ဘူးတွေ ခဏဖြုတ်ထားလိုက်ကြတယ်။
၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ညနေ ၃း၃၈